The Top 10 Atụmatụ ọcha na ịtụte gị Android
1 Doro Anya Android / iOS
1.1 Kọwaa ekwentị gị
1.2 Doro Anya iPad Data .
1.3 Doro Anya iPad History
1.4 Doro Anya Android Cache
1.5 Doro Anya Android History
1.6 Doro Anya Android Data
2 Clean Android / iOS
2.1 Clean iPod
2.2 Clean iPad
Ma gụọ 2.3 Clean Mobile Phone
3 Ekwentị Speed
3.1 Mma iPad Speed
3.2 ọsọ Up ekwentị gị
3.3 Ule Android Speed
3.4 Ule iPad Speed
3.5 Ule Mobile Internet Speed
3.6 Tulee Mobile Internet Speed
4 Top égwu
4.1 Clean nna ukwu Alternative
4.2 Hichaa akporo ekwentị
4.3 Android Speed ​​Up égwu
4.4 iPad Mpịakọta enyem égwu
4.5 Android Fast Downloader
Android 4.6 Optimizers
4.7 Android Igwefoto égwu
4.8 ekwentị Clean égwu
4.9 batrị ekwentị Optimizers
4,10 Android Boosters
4.11 Android nhicha égwu
4.12 Mobile Fast Browsers
Na e nwere nsogbu na-echegbu ọtụtụ gam akporo ọrụ - nsogbu nke ha Android ngwaọrụ lagging. Ọtụtụ mgbe, lagging eme n'ihi na nke oké data nchekwa na ala Ram. Lagging nwekwara ike mere ruru ekpo oke ọkụ. Ọ bụrụ na ị gị n'anya Android, ma na-achọ ime ka ọ ịrụ ya kacha, mkpa ka ị mara otú ị pụrụ ịtụte Android ngwaọrụ.
Arụmọrụ nke ekwentị gị ga-eji nwayọọ nwayọọ njọ mgbe ndusụk ini. The mobiles na-kwesịrị ịbụ ngwa ngwa na-enye ohere ihe ozugbo. Otú ọ dị, na-enweghị ihe ọ bụla ilekọta ọ gaghị ekwe omume. Lee ndị 10 Atụmatụ ọcha na ịtụte gị Android ekwentị:
Wondershare MobileGo - One Kwụsị Ngwọta jikwaa gị Mobile Web
Otu click ibudata, jikwaa, ibubata & mbupụ gị music, foto na vidiyo
De-oyiri kọntaktị, ịgbanwee ngwaọrụ, jikwaa gị ngwa collection, ndabere & weghachi na izipu ozi site na desktọpụ gị
Mirror gị android ngwaọrụ ka izipu ozi, ma kpọọ Android egwuregwu na kọmputa gị
Optimze ngwaọrụ gị na aga na MobileGo ngwa.
Jikọọ Android ekwentị na MobileGo
Tọghata ma nyefee Music ka Android
Send / Zaghachi ozi site na PC
Nkwado ndabere na mpaghara weghachite Android
Jikwaa Android Ndi ana-akpo
Download Android ngwa, music na vidiyo
1. Mụta eru nke ngwaọrụ
Ọ dị mkpa mara ngwaọrụ gị. Mụta banyere ya ike na drawbacks. Nke a ga-egbochi gị overburdening ekwentị. Ị ga-enwe ike jikwaa ekwentị gị na ego ha nwere ma na-enwe ịrụ ọrụ ekwentị na kacha larịị.
2. Debe ngwaọrụ gị emelitere
Ọ ga-mgbe wụnye mmelite ka anya dị ka ha dị. The buru ibu mere bụ mma na aga version na gwara nke chinchi. Google mgbe niile-eweta ọhụrụ ndozi-eme ka n'aka ngwaọrụ ọzọ bụ anụ, jide elu arụmọrụ, ọsọ na Njikọta. Ego n'okpuru Banyere ekwentị ịhụ ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla mmelite ọhụrụ dị. Ke adianade do, na-agụ banyere ngwaọrụ gị na ozi ọma n'ihi na-abịa mmelite.
3. Wepụ achọghị ngwa
Ị ga na-na ngwa ọdịnala na ndị bara uru n'ihi na ị na-eji mgbe nile. Ọ bụrụ na ngwa na-anọgide ejibeghi n'ihi na ihe karịrị 2-3 izu biko wepu ya. App na-agba ọsọ na ndabere nke na-eji elu ohere na Ram. N'ihi ya, na-ebelata ịrụ ọrụ nke ekwentị gị. Ị nwere ike iji ọzọ software mara nke égwu na-achọghị ngwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ iwepụ ya, ọ dịghị gbanyụọ ha.
4. gbanyụọ enweghị isi Filiks
Otu n'ime isi ihe mere na ngwaọrụ gị na-aghọ onye na-adịghị bụ n'ihi na ị na-asaghe ọtụtụ ngwa n'otu oge! Ọ na-adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-aga azụ Ihuenyo mgbe egwu na-akpọ a egwuregwu - egwuregwu ka nwere ike na-agba ọsọ na ndabere, na-elu bukwanu ego nke Ram na N'aka slowing na ngwaọrụ.
E nwere nnọọ ọtụtụ ndabere Filiks na-agba ọsọ na ngwaọrụ gị na-ewe ahụ Ram nakwa dị ka ohere nchekwa. Ị ga-chọrọ n'ezie ka na-ndị a ndabere Filiks a kacha nta. Ị nwere ike iji ọzọ software na-esochi na ndabere usoro na-enye gị ịchịkwa na-egbu ha. Ị nwere ike mgbe niile na-aga ngwa njikwa na gbanyụọ ha si pụtara site na iwepu dị ka defaults.
5. Melite gị ngwa
Dị nnọọ ka emelite sistemụ, ọ dị mkpa ka ị nọgide na-apps mmelite. Gbalịa na-update ngosi on na-enye ohere na ekwentị gị ibudata mgbe ọ bụla ha dị. Developers-agbalị mgbe nile idozi ochie mbipụta na tinye ọhụrụ atụmatụ na melite arụmọrụ na-agba nke na ekwentị gị. Developers mgbe chọrọ ha ọrụ na-ọgụ na mgba kefriza ngwa ma ọ bụ lagging igodo. New mmelite tinye kwụsie ike na ngwa na N'ihi ya, kwụsie ike n'ihi na ị na ekwentị.
6. Iji ezi na kaadị ebe nchekwa
Ọtụtụ n'ime ndị na kaadị ebe nchekwa weighs ala ekwentị gị ọ bụrụ na ị nwere ezi ekwentị ma ala esịtidem ebe nchekwa. Agbakwụnye elu-ọsọ na kaadị ebe nchekwa nwere ike mbo mbuli ọ bụla ekwentị na ala esịtidem ebe nchekwa. I nwekwara ike ịgbakwunye ike dị otú ahụ elu-ọsọ kaadị ebe nchekwa. Ị nwere ike iji n'etiti 2 GB 32 GB na ekwentị gị. -Eji Klas 6 ma ọ bụ Klas 10 N'ihi na Android ngwaọrụ ma ọ bụrụ chọrọ oké arụmọrụ na ekwentị gị.
7. ole na ole wijetị na n'ụlọ meziri
Wijetị-adịghị anya jụụ ma dị irè ma na-ewe elu nnukwu ego nke batter na Ram. Agbakwụnye wijetị na ihuenyo bụ idebe ngwa na-agba ọsọ na ndabere 24x7. Debe ebe obibi gị ihuenyo kacha nta. I nwere ike na ya na-kacha atọ na na kacha nta ego nke wijetị. Ọ bụrụ na ị chọrọ tinye agbatiri njikwa dị ka Wi-Fi, Bluetooth ma ọ bụ GPS. Number nke n'ụlọ ihuenyo na wijetị bụghị nanị mbelata arụmọrụ ma igbapu na batter nnọọ ngwa ngwa.
8. Zere ndụ na akwụkwọ ahụ aja
Coolest na ụtọ anya nke akwụkwọ ahụaja nwere ike na-eri gị arụmọrụ na ndụ batrị. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe ọ bụla ndụ akwụkwọ ahụaja, wepụ ha na ị ga-ahụ ozugbo sara dị iche na arụmọrụ. Live akwụkwọ ahụaja nwere ndabere usoro na-ewe ukwuu nke Ram na CPU cycles. Ọ bụrụ na o kwere omume, iwelata Personalization iji isiokwu na ndụ akwụkwọ ahụaja. Jiri naanị mfe ma mgbe akwụkwọ ahụ aja.
9. Kwụsị akpaaka mmekọrịta
Mmekọrịta bụ oké atụmatụ na-niile ozi, mmelite na ọtụtụ ndị ọzọ na oge. Otú ọ dị, ha na-na-ukwuu nke gị Ram, nchekwa na data. Mmekọrịta ego maka mmelite ọhụrụ maka onye ọ bụla ngwa ọdịnala na mgbe nkeji nke nwere ike ịbụ banyere 5 nkeji. N'ihi ya oge ọ bụla ya anya ekwentị gị na-ahụ obere umuihe na arụmọrụ. I nwere ike na mmekọrịta on maka oké mkpa ngwa ọdịnala dị ka Gmail, ozi wdg ma na-ọzọ anya ma ọ bụrụ na ọ bụghị chọrọ.
10. Gbanyụọ eserese
Ọ bụrụ na ị chọrọ mma arụmọrụ na-adịte aka batrị, mgbe gbanyụọ animations. Ọ na-adịghị mkpa ma ọ bụrụ na ekwentị gị nwere 3,500 mAh batrị ma ọ bụ a 1,500 otu, animations na-ebi ndụ na akwụkwọ ahụ aja nwere ike igbapu batrị mara mma ngwa ngwa.
Eserese dị ka na-enye smoothing achọ na-aga aga ma ọ degrade arụmọrụ. Ọ bụrụ na ị na-atụgharị ha anya, ị na-atụgharị mmezi ndabere usoro na ezie na ọ ga-ele anya snappy, ọ ga-ebu ọnụ na ngwa ga-arụ ọrụ ka mma. Nke a n'ọnụ dị mkpa maka oké ọrụ ma eleghị anya ọ ga-abụ ga na-kasị elu arụmọrụ.
On mgbe nile ndabere, na-ị na ekwentị scanning maka virus ma hichaa cache. Agaghị ekwe omume, na-agbalị factory tọgharịa ekwentị gị ọ bụla ọnwa ole na ole, nke a ga-enyere gị ịnọgide na-enwe kacha arụmọrụ n'ihi na ogologo oge.
4 Ụzọ na-ehichapụ akporo ekwentị ka e meere gị Nzuzo
Top 6 Android Data Manager na-esochi nke Data ojiji
Otú nyefee Ndi ana-akpo si Outlook ka Android
Otú nyefee Data si Huawei ka Android
Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere YouTube ka MP3 maka Android Devices
Olee otú Jiri Google Ugbu a na gam akporo Ngwaọrụ
Olee otú Play MKV faịlụ na ihe akporo ekwentị
Get Grooveshark Music n'ime Google Music Library
3 ụzọ na nkwado ma weghachite akporo ekwentị effortlessly
Android App Manager: 1 Pịa Wụnye Android ngwa site PC maka Free
> Resource> Android> The Top 10 Atụmatụ ọcha na ịtụte gị Android